Isiokwu Hanna Johnson na Martech Zone |
Edemede site na Hanna Johnson
Top 5 Atụmatụ maka Survey Greatness
Monday, April 23, 2012 Mọnde, Jenụwarị 22, 2018 Hanna Johnson
E nwere eziokwu dị mfe nke oge presentedntanetị gosipụtara: Solchọta nzaghachi na inweta nghọta n'ime isi ahịa gị na ahịa ahịa dị mfe. Nke a nwere ike ịbụ ihe magburu onwe ya ma ọ bụ ihe na-atụ ụjọ, dabere na onye ị bụ na ihe ị na-achọ nzaghachi maka, mana ọ bụrụ na ị nọ n'ahịa iji jikọọ na ntọala gị iji nweta echiche ha n'eziokwu, ị nwere tọn nke free na-eri irè nhọrọ ime. Enwere
Chọta nzaghachi ndị ahịa tupu, n'oge, na mgbe ịmalite usoro azụmaahịa ọhụụ bụ ụzọ dị mma iji chọpụta etu ị si ele ndị ahịa gị anya. Chọghị iche n’echiche na ịmara etu ahịa gị (30, 45 afọ nne na-arụ ọrụ, dịka ọmụmaatụ) si ele ihe ị na-eme, ọkachasị ebe ọ bụ na ọ dị mfe ịjụ onwe gị. Ozi ọma maka ndị ahịa, ma ị na-arụ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ
Mọnde, Jenụwarị 9, 2012 Sunday, October 4, 2015 Hanna Johnson
Ọ bụrụ na ị na-agụ Martech Zone, Ohere inweta bụ mmadụ clued gị na ugbua na eziokwu na ọ ga-abụ ihe dị mkpa karịa mgbe ọ bụla iji nweta azụmahịa gị na-elekọta mmadụ nke afọ a. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya anyị mere maka GrowBiz Media kpughere na 40% nke ndị na-eme mkpebi azụmahịa pere mpe na-ezube iji mgbasa ozi mmekọrịta na 2012. Anụrụ m onye ọbịa na Business Insanity Radio Talk Show na-atụ aro na a ga-enye ndị ahịa niile ahịa ha.